Akuko - COVID-19 na - ebute mkpa batrị na - esighi ike, Samsung SDI nke abụọ na - erite uru na - agbakọ uru 70% afọ-afọ.
COVID-19 na-ebute mkpa batrị na-adịghị ike, Samsung SDI nke abụọ na-enweta uru net net uru na-agbakọ 70% afọ-afọ
Battery.com matara na Samsung SDI, onye enyemaka batrị nke Samsung Electronics, wepụtara akụkọ gbasara ego na Tuesday na uru ahịa ya na nke abụọ kwụrụ 70% afọ-na afọ ruo 47.7 ijeri (ihe dị ka $ 39.9 nde), bụ isi n'ihi ka ike batrị na-adịghị ike kpatara ọrịa oria ọwụwa okpueze ọhụrụ.
(Isi iyi onyonyo: Samsung SDI website webụsaịtị)
Na July 28th, Battery.com matara na Samsung SDI, onye enyemaka batrị nke Samsung Electronics, kwupụtara akụkọ gbasara ego ya na Tuesday na uru ahịa ya na nke abụọ kwụrụ 70% afọ-na afọ ijeri 47.7 ijeri (ihe dị ka US $ 39.9 nde ), tumadi n'ihi ọrịa nje okpueze ọhụrụ nke batrị achọrọ na-adịghị ike.
Akụkụ nke abụọ nke Samsung SDI mụbara site na 6.4% gaa na puku ijeri 2.559 meriri, ebe uru arụ ọrụ dara 34% na 103.81 ijeri meriri.
Samsung SDI kwuru na n'ihi ntiwapụ ọrịa na-ebelata, ahịa nke batrị ụgbọ ala eletrik dị ala na nkeji nke abụọ, mana ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya na n'ihi nkwado European na-akwado ụgbọ ala eletrik na ngwa ngwa ahịa nke sistemụ nchekwa ike na mba ofesi, chọrọ ga-abawanye. emechaa afọ a.